War deg deg ah, durba xisbiga wadani oo rabshado kabilaabay dalka, Somalidu waxay tidhaahdaa, Oofi ereygaaga! (keep Your Word) by maxamed jeex | Awdalmedia.com
War deg deg ah, durba xisbiga wadani oo rabshado kabilaabay dalka, Somalidu waxay tidhaahdaa, Oofi ereygaaga! (keep Your Word) by maxamed jeex
Shacabka reer SL waxay u dareereen 13/11/2017 iney kala doortaan 3 sadex madaxweyne & 3 sadex madaxweyne ku xigeen taasi oo sinabada ah ku dhacday waàna alxamdulilaahi sida ay inoogu dhacday doorashadu.
Laakiin waxaa durba soo baxaya in balankii ay umada reer SL ay u qaaadeen sadexda xisbi qaranba , ee ahayd iney ogalaan donaan natiijada ,inuu durba xisbigii laga shikisnaa ee wadani uu sicad u diidan yahay guusha xisbiga kulmiye.
Xisbiga wadani sugi waayey ku dhawaaqida natiijada guusha cidii ku guuleysata doôrashada dalka oo dhan markii uu ogaadey in xisbiga kulmiye uu boqolkiiba 75% ku hogaaminaayo doorashada dalka oo dhan ,
Ayuu wuxuu bilaabay inuu dalka galiyo qas & khalkhal ,
Hadaba shacabka wanaagsan ee reer SL waxaan leeyahay waad aragtaan in wadani doonaayo inuu dalkiina ka abuuro dagaal sokeeye ee waxaan inigula talinayaa inaad nabad galyadiina aad ilaashataa oo aad iska qabataan dagaal ooge wadani .
Dhamaan shacabka reer SL waxaan ku hambalyeynayaa doorashada ay doorteen xisbiga kulmiye oo ah xisbi istaahila inuu dalkan hogaamiyo 5 shanta sano ee soo socota haddii alle idmo.